Boqortooyada Sacuudiga oo laga fashiliyay shirqool lamid ah midkii wariye Jamal Khashoggi | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Boqortooyada Sacuudiga oo laga fashiliyay shirqool lamid ah midkii wariye Jamal Khashoggi
Boqortooyada Sacuudiga oo laga fashiliyay shirqool lamid ah midkii wariye Jamal Khashoggi
Boqortooyada Sacuudiga carabiya oo sida lawada ogsoonyahay qofka daahah gadaashiisa ka maamulo uu yahay Maxamed Bin Salmaan kaasoo 2017dii loo doortay dhaxal-sugaha boqortooyada ayaa waxaa soo badanayo eedeyamaha loo jeedinayo tan iyo markaas.
2018dii ayay aheyd markii ay shirqool caalamka dhan uu ogaaday ku dileen wariye Jamal Khashogi kaasoo lagu dhex dilay qunsuliyada ay Sacuudiga ku leeyihiin magaalada Stanbull wuxuuna noqday mid kamid ah shirqooladii ugu caansanaa ee banaanka yimaado mudooyinkaan dambe kadib markii laamaha ammaanka Turkiga ay banaanka soo dhigeen cadeymo la xiriira shirqoolkaas iyo ragii ku lugta lahaaba.
Ayadoo dhiiqada sacduuiga kasoo gaartay dilkii Jamal Khashogi wali kasoo kabsan kadib markii siyaasadooda guracan dowlado badan iska diideen sidoo kalana mashaariic badan oo muhiim u ahaa ka fashilmeen hadana waxaad moodaa Sacuudiga ineysan wali wax ka baran casharadii shirqoolkii Jamaal Khashogi.
Maamulka boqortooyada sacuudiga ayaa ku dhaqmo siyaasada ah in la colaadiyo lana khaarijiyo cidkasta oo kahor timaada amarka dhaxalsugaha Sacuudiga ayadoona arinkaas darteed ayxabsiyada ugu jiraan boqolaal ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga oo uu ugu horeeyo Dhaxal-sugihii hore ee Sacuudiga kaasoo xaq u lahaa xilka boqortooyo kadib Boqor Salmaan balse laga xayuubiyay xilkaas ee Maxamed bin Naa’if.
Hadaba sirdoonka Mareykanka ayaa dhawaan fashiliyay qorshe lagu doonayay in lagu khaarijyo la taliyihii dhaxalsugihii hore ee Sacuudiga Maxamed Bin Naa’if kaasoo lagu magacaabo Sacad Al-Jabri kuna sugan dalka Mareykanka kahor inta uusan u wareegsan dalka Kanada oo uusan naftiisa la baxsan.
Sacad Aljabri ayaa wuxuu la taliye u ahaa dhaxalsugihii Hore ee Maxamed Bin aa’if kaasoo haatan Sacuudiga ku xiran wuxuuna sidoo kale Sacad Al-Jabri ahaa siyaasad aqoon saameyna ku leh arimha sirdoonka asigoona gacan saar weyn la lahaa sirdoonka mareykanka ee CIA iyo FBI ba.
Maxamed Bin Salmaan ayaa wuxuu ka cabsi qabay galaangalka siyaasadeed ee Sacad Al-Jabri owgeed in arinkaas asiga u keento dhibaato ah inuu xumaado xiriirka asiga iyo Washington kala dhaxeeyo sidaas owgeedna wuxuu go’aansaday inuu khaarijiyo Sacad Al-Jabri kahor inta uunan xumeynin xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka ka dhaxeeyo.
Hase yeeshee Sacad Al-Jabri ayaa ka war helay qorshaha lagu doonayo in lagu khaarijiyo wuxuuna dhuumasho ku tagay dalka Kanada oo uu magan-galyo weydiistay hase yeeshee Sirdoonka Sacuudiga ayaanan halkaas uga harin waxayna doonayeen iney dagaan qorshihii labaad ee ay ku qaarijin lahaayeen.
Qorshaha Sirdoonka Sacuudiga ayaa waxaa kawar helay sirdoonka Mareykanka ee FBI ayagoona si dag dag ah ula xiriiray sirdoonka Kanada ugana digay qorshaha sirdoonka Sacuudig la maaganyihiin Sacad Al-Jabri.
Kadib digniintaas waxaa siweyn loo adkeeyay amaanka Sacad Al-Jabri ayadoona Kanada ay siweyn uga carootay qorshahah ay Sacuudiga ku dooneysay in dhulkeeda shirqool ku fuliso waxayna dag dag ugu yeertay safiirka Sacuudiga u fadhiyo kanada ayagoona su’aalo arinkaas ku saabsan weydiiyay.
Sidoo kale qaar kamid ah msuuliyiinta Kanada ayaa soo jeediyay in Sacuudiga talaabo laga qaado maadaama ay kusoo xadgudbeen madax banaanida Kanada.
Dhanka kale Sacad Al-Jabri ayaa maxkamad Mareykanka ku taalo la tiigsaday Maxamed Bin Salmaan iyo qaar kamid ah sirdoonkiisa shirqoolkaan waday kadibna waxaa dhacday in Maxkamada ay raga lasoo eedeeyay u qabato mudo 21 maalmood iney uga soo jawaabaan eedeymaha Sacad Al-Jabri.
Kadib dhacdooyinkaas is xigxigay warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa mareykanka ayaa siweyn wax uga qoray hab maamulka Sacuudiga ayagoona farta ku fiiqay intalaabada dhicisowday ee lagu doonayo in lagu khaarijiyo Sacad Al-Jabri ay muujineyso ku lug lahaanshaha Sacuudiga ee Dilkii Khashogi.
Warbaahinta Al-Jazeera ayaa dhankeeda sheegtay sababta uu Bin Salmaan u doonayay inuu u khaarijoyo Sacad Al-Jabri ay aheyd si uusan u xumeynin xiriirka Washington iyo Riyaad ka dhaxeeyo hase yeeshee haatan waxaa muuqato in xiriirkaas sii xumaanayo kadib markii Washington ay taageertay go’aanka Maxkamada ku aqbashay dacwada Bin Salmaan laga soo gudbiyay sidoo kalana waxaa intaas dheer in xiriirka Kanada iyo Sacuudigana sii xumaaday.